Neodymium Magnet, Samarium Magnet Cobalt, Motor Magnet - Horizon
Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. dia mpamorona voatanisa mitsivalana misy andriamby Neodymium tsy fahita amin'ny tany sy ireo fivoriambe andriamby mifandraika amin'izany. Noho ny fahaizanay tsy manam-paharoa sy traikefa manankarena eo amin'ny sehatry ny andriamby, azonay natao ny namatsy ny mpanjifa vokatra marobe avy amin'ny prototypes ka hatramin'ny famokarana betsaka ary manampy ny mpanjifa hahatratra vahaolana mahomby.
Fanjonoana roa sosona…
RoHS sy REACH mifanaraka
Neodymium magnet dia be mpampiasa amin'ny fitaovana elektrika sy elektronika, ary na amin'ny vokatra mpanjifa na kilalao ho an'ny ankizy aza, noho izany dia mandray fepetra izahay hifehezana sy hiantohana fa mifanaraka amin'ny RoHS sy REACH ny vokatra manetsika.
Kalitao voalohany amin'ny vidin'ny fifaninanana
Miorina amin'ny filozofia voalohany manara-penitra, manatsara hatrany ny fizotry ny famolavolana sy ny famokarana izahay ary ny fitantanana hanatsara ny vidin'ny mpanjifa. Matoky izahay ny hilaza fa noho io kalitao io ihany, ny vidinay dia mifaninana kokoa noho ny mpifaninana.
Ny haben'ny orinasanay antonony dia ahafahana mandrindra haingana amin'ireo sampana mifandraika sy valiny amin'ireo mpanjifa. Ny fahaiza-manao manamboatra ao an-trano sy ny fanisana be dia be an'ireo fivorian'ny andriamby mahazatra dia manome antoka ny fandefasana ara-potoana.
Ny andriamby Neodymium tsy dia fahita firy sy ireo fivorian'ny andriamby Neodymium samihafa dia vokarina ao an-trano. Ny fahaizantsika manetsika dia ahafahantsika manome vokatra magnet hafa sarotra ho an'ny mpanjifa mba hiantsena mijanona tokana.
tohizo ny vaovao farany sy lahatsoratra nasongadina momba ny andriamby